YawNathan Zinyaw: သီချင်းရုပ်ရှင်
Posted by ယောနသံစင်ရော် at 3:25 PM
ကောင်းတယ် အမရေ။ ကျနော်တော့ သီချင်းရုပ်ရှင်
ဆိုရင် အိန္ဒိယကားတွေဘဲ အကြည့်များတယ်။ အမ
ပြောတော့မှ ဒီဇာတ်လမ်းတွေ ရှာကြည့်အုံးမယ်။
အမပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ကျနော် ကြည့်ဘူးလား
မကြည့်ရသေးဘူးလား သေသေချာချာ မသဲကွဲဘူး
ဖြစ်နေတယ် အမရေ။ အားပေးပါတယ် ဗဟုသုတ
အီဗီတာ ရုပ်ရှင်ကား တကားပဲ ကောင်းကောင်း သိတယ်။ ဒါတောင် မကြည့်ရသေးဘူး၊ သတင်းတွေမှာ ကြားဖူးတာက ဒီရုပ်ရှင်ကားကို အာဂျင်တီးနား ပြည်သူပြည်သားတွေ မကြိုက်ဘူးလို့ သိရတယ်။ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေ လက်ခံထားတာက သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အဖြစ် မြင်တယ်။ သူတို့ တိုင်းပြည်အတွင်းက အမြင်နဲ့ တခြားတိုင်းပြည်က အမြင်က မတူညီ ကွဲပြားတယ်၊ ဒါကြောင့်လဲ သမိုင်းတွေဟာ ရေးသူတို့၏ စိတ်ထားနှင့် ယှဉ်ပြီး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားတာ များတယ်။
ဘာပြောပြော သုတတခုအဖြစ် မှတ်သွားတယ်။
Evita ကိုတော့ကျနော်လည်းကြိုက်တယ်.Chicago လည်းကောင်းတာပါဘဲ.ကျန်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုတော့
သီချင်း ရုပ်ရှင်ကြိုက်မှတော့ ပြဇါတ်ဆို မပြောဝံ့တော့ဖူး၊ အနုပညာ ခံယူသက်ဝင်မှု မြှင့်တယ် ဒါကြောင့်လဲ စာရေးကောင်းသကိုး....။
The King and I ,My Fair Lady , The sound of Music တွေကိုကြည့်ပြီးပြီ..Evita ကို
ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ The sound of Music ကိုတော့
ကိုအောင်၊ ကိုလူလ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကိုဆောင်းယွန်း မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတဲ့ အရာဟာဘဝမှာ ဘာနဲ့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရဘူးတဲ့အကို။ မနော် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါနော် အမကြိုက်မှာပါ။ ကိုဒူကဘာ ကျမက သီချင်းဆိုတာလည်း ဝါသနာပါသေးတယ်။
အစ်မရေ ညီမလည်း သီချင်းရုပ်ရှင်တွေကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ High School Musical လိုကားတွေပဲ ကြည့်ဖူးသေးတယ်။ အစ်မပြောတဲ့ကားတွေကိုမကြည့်ဘူးသေးဘူး။ Comedy နဲ့ Drama အရမ်းကြိုက်တယ်။ အစ်မနဲ့တူတာပေါ့။
စကားတွေ ချန်မထားခဲ့ပေမယ့် ပုံမှန်တော့ ဝင်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်နဲ့ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ဗဟုသုတတွေလည်း ရပါတယ်။ နီးနီးနားနားမှာပြနေရင် သွားပြေးကြည့်ချင်လောက်အောင်လည်း အရေးအသားတွေက ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
ခပ်ငယ်ငယ်ကတော့ အမေနဲ့ အတူတူ အိန္ဒိယ Musical ဓာတ်ရှင်တွေ အတော် ကြည့်ဖြစ်တယ်ဗျ။ အဲဒီနောက် အဆက်ပြတ်သွားတာ အတော်ကြာပြီ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ Mamma Mia! ဆိုတဲ့ တစ်ကားကို ပြန်ကြည့်ဖြစ်တာ ပထမဆုံး Musical Movie ပါပဲ။ အစ်မရဲ့ အညွှန်းအရ Evita ကို ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်ဖို့ ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်ဗျာ။
စကားမစပ်- Musical ဓာတ်ရှင်တွေက သာမန် ဓာတ်ရှင်တွေထက် ထူးထူးခြားခြားကြီး ရှည်လွန်းတာကိုတော့ အနည်းငယ် ကသိကအောက် ဖြစ်မိသဗျ။ :)
Mammamia လည်းကောင်းတယ်တဲ့။ မကြည့်ရသေးပါဘူး၊ သွားကြည့်မလားလို့၊ http://www.mammamiamovie.com
ကျွန်တော်ကတော့ ABBA ဆိုရင်အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း သီချင်းရုပ်ရှင်တွေ ကြိုက်တယ်။ Chicago နဲ့ Mama Mia! ကိုတော့ ကြည့်ပြီးပြီ။ ကျန်တဲ့ကားတွေ မကြည့်ဖူးသေးဘူး။ ကျွန်တော်က ABBA သီချင်းတွေကိုလည်း ကြိုက်တယ်လေ။